DC-G85KGC Mirrorless DSLM Camera - Panasonic
LUMIX Digital Single Lens Mirrorless Camera DC-G85KGC
တက်ကြွလှုပ်ရှားနေသော ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက် ပြင်ပရိုက်ကူးရေး ကင်မရာ
5-Axis Dual I.S.2နှင့် 4K နည်းပညာများ အသုံးပြုထားသော ရေစိုခံ/ဖုန်မဝင်သည့် ပြင်ပရိုက်ကူးရေး ကင်မရာ LUMIX G85 သည် ပြင်ပတွင် အသုံးပြုရာ၌ လက်ရာမြောက်သော ပုံရိပ်အရည်အသွေးဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော အခိုက်အတန့်များကို အမိအရ ရိုက်ကူးပေးသည်။
စွန့်စားခန်းအတွက် ပြိုင်ဘက်ကင်း ကင်မရာ
ဘဝ၏ စွန့်စားခန်းများဖွင့်သောအခါ ရောက်လေရာနေရာတိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်မည့် ကင်မရာတစ်လုံး လိုအပ်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံဆရာ Mitchell Kanashkevich သည် သူ၏ လွန်ခဲ့သော ရိုမေးနီးယား ခရီးစဉ်အတွက် LUMIX G85 ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ပြင်ပရိုက်ကူးရေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သော ပုံရိပ်တည်ငြိမ်စနစ် နှစ်ခုသည် ခက်ခဲသော သို့မဟုတ် အမြန်လှုပ်ရှားနေသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ထင်ရှား၍ ကြည်လင်ပြတ်သားသော ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်စေသည့်နည်းတူ ရာသီဥတုဒဏ် ခံနိုင်အောင် အလုံပိတ်ထားသော ကျစ်လစ်သည့် ကိုယ်ထည်နှင့် kit lens က သင် သွားလေရာ ခရီးစဉ်တိုင်းတွင် ကင်မရာကို သင်နှင့် အဆင်ပြေစွာ သယ်ဆောင်သွားနိုင်စေသည်။
လှုပ်ရှားနေသော ဓာတ်ပုံများကို ဖန်တီးပါ။ မှုန်ဝါးဝါးမဖြစ်ပါစေနဲ့။
သင် ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ကမ္ဘာလောကကြီးက ငြိမ်ငြိမ်နေပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် LUMIX G85 သည် အထူးကောင်းမွန်စွာ လက်တုန်တုန်ဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော ရိုက်ချက်ကို ပြုပြင်ပေးရန်နှင့် သင်၏ ရိုက်ချက်များကို5F-Stops**အထိ ထိန်းညှိပေးရန် 5-Axis Dual I.S.2 (ပုံရိပ်တည်ငြိမ်စနစ်)*ကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပြီး ကိုယ်ထည်နှင့် မှန်ဘီလူး တည်ငြိမ်စေခြင်းကို ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ 5-axis တည်ငြိမ်စေခြင်းသည် 4K ဗီဒီယိုအပါအဝင် ကျယ်ပြန့်ပြီး ပုံမှန်ထက် ဆုံတာရှည်လျားသော တယ်လီဖိုတိုမှန်ဘီလူးသုံး ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုနှင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှု နှစ်ခုလုံးတွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
** 5-Axis Dual I.S.2သည် တွက်ဖက်အသုံးပြုနိုင်သော မှန်ဘီလူးကို တပ်ဆင်သည့်အခါ အလုပ်လုပ်သည်။ မှန်ဘီလူးကိုလည်း ဖမ်းဝဲအပ်ဒိတ်ပြုလုပ်ဖို့ လိုသည်။
မှန်ဘီလူးတွေကို လဲလိုက်ပြီး သင့်ရဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ချဲ့ထွင်လိုက်ပါ
LUMIX G85 ၏ တိကျမှုမြင့်မားသော ဂိုင်ရိုအာရုခံ ဆင်ဆာနှင့် နည်းစနစ်အသစ်က 5-Axis Body I.S ၏ အလင်းအမှောင် ချိန်ညှိမှု စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ဤအံ့အားသင့်ဖွယ် စွမ်းအားသည် O.I.S တပ်ဆင်မထားသော အရင်အချိန်က အသုံးပြုခဲ့သည့် မှန်ဘီလူးများ အပါအဝင် မှန်ဘီလူးအားလုံးအတွက် လက်တုန်မှုကို ပြုပြင်ပေးသည်။
LUMIX G85 သည် ရှတ္တာယူနစ်တွင် လျှပ်စစ်သံလိုက် ဒရိုက်ဗ်တစ်ခုကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ရှတ္တာ အစိတ်အပိုင်း လှုပ်ရှားမှုကြောင့် တုန်ခါမှုဖြစ်ပွားခြင်းကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပြီး ရှတ္တာမြည်သံကို လျှော့ချပေးသည်။ ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်အတွက် ပကတိ မဂ္ဂနီဆီယမ်ကို အသုံးပြုထားပြီး ၎င်းသည် ယခင် G7 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 90% ခန့်အထိ ရှတ္တာတုန်ခါမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်
အကောင်းဆုံး ရိုက်ချက်ကို ဘယ်တော့မှ လက်လွတ်မခံပါနှင့်
LUMIX G85 ရှိ 4K PHOTO လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဗီဒီယို အစီအစဉ်တစ်ခုမှ (30fps ၌ရိုက်ကူးသော) ဖရိန်ကို ကင်မရာထဲတွင် ရွေးချယ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံသော အခိုက်အတန့်ကို အမိအရ ရိုက်ကူးပြီး ၎င်းကို သီးခြား ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး မြင့်မားသည့် ရုပ်ပုံတစ်ခုအနေဖြင့် သိမ်းဆည်းထားစေနိုင်ပါသည်။ အချိန်တိုင်း လက်မလွတ်သင့်သော ထိုတဒင်္ဂ အခိုက်အတန့်လေးများကို ဖန်တီးရန် လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာပင် ရိုက်ကူး၊ ရွေးချယ်ပြီး သိမ်းဆည်းပါ။
သင် ဖိုးကပ်စ်ချိန်လိုသော အရာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးလိုက်ပါ။ နောက်မှ ဖိုးကပ်စ်ချိန်ခြင်းသည် သင် ရိုက်ကူးပြီးသွားသော အချိန်တွင်ပင် ပုံကို ပြန်ကြည့်ပြီး သင် ထင်ရှားပြတ်သားစေလိုသော ဧရိယာကို ထောက်ကြည့်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ထို့ပြင် Focus Stacking လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပါဝင်သော နောက်ထပ်အရာများမှာ သင့်အနေဖြင့် တူညီသော ပုံတွင် များစွာသော ဆုံချက်အမှတ်များကို အလွယ်တကူ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ရိုးရှင်း၊ အံ့အားသင့်စရာကောင်းပြီး LUMIX G85 အတွင်းမှာပင် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အလွန်တရာ မြန်ဆန်စွာ ဖိုးကပ်စ်ချိန်နိုင်ခြင်း
လျင်မြန်စွာရွေ့လျားသော အရာဝတ္ထုများကိုပင် DFD (Depth From Defocus) နည်းပညာ၏ ကျေးဇူးဖြင့် ရိုက်ကူးလိုက်ပါ။ ပုံနှစ်ပုံကို မတူညီသည့် ပြတ်သားမှုအဆင့်များဖြင့် တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းဖြင့် အရာဝတ္ထုနှင့် အကွာအဝေးကို ၎င်းက ချက်ချင်းတွက်ချက်ပေးပြီး မြန်နှုန်း အထူးမြင့်မားသည့် AF နှင့်6fps ကို AFC ဖြင့် ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးပေးသည်။ AFS သုံးပြီး9fps နှုန်းဖြင့်လည်း ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးပေးနိုင်သည်။
UHS-II SDXC/SDHC မမ်မိုရီကတ်ကို အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ကြားခံ မမ်မိုရီကို တိုးမြှင့်ပေးထားသည့်အတွက် 300 (JPEG) / 45 (RAW) နှင့်အထက်အထိ ရုပ်ပုံများကို မှတ်တမ်းတင် ဖမ်းယူရိုက်ကူးနိုင်သည်။
LUMIX G85 ၏ 0,74x ဆ ချဲ့ပေးနိုင်စွမ်းရှိသော Live View Finder (35mm နှင့်ညီမျှသည်) ကြောင့် သင်၏ ရိုက်ချက်တိုင်းကို ဘောင်ခတ်ပြီး သင် မြင်သည့် အရာတိုင်းကို ရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းအပြင် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ မြင်နိုင်စေရန်အတွက် 2360K-dot ရှိသော ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနှင့် ခန့်မှန်းခြေ 100% အရောင် ထပ်ဆင့်ထုတ်လွှတ်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် ကိုင်သည့်အခါတွင်ပင် ငြိမ်ငြိမ် ကိုင်ထားနိုင်သည်
စွမ်းရည်မြှင့်ထားသော ထူထဲသည့် ဒီဇိုင်းကြောင့် ရိုက်ကူးရာတွင် လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့်ပင် ငြိမ်ငြိမ် ဆုပ်ကိုင်ပြီး ရိုက်ကူးနိုင်သည်။ ဂရုတစိုက်ဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော ခွက်နေသော ပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့် လက်ချောင်းတိုင်းကို နေရာတကျဖြစ်အောင် လမ်းညွှန်ပေးပြီး အချင်း ကျယ်သော မှန်ဘီလူးများကို တပ်ထားသည့် အချိန်တွင်ပင် လက်ညှိုးကို ရှတ္တာခလုတ်ပေါ်တွင် သဘာဝအတိုင်း တင်ထားနိုင်စေပါသည်။
ပါဝါချွေတာ LVF ရိုက်ကူးမှု
တစ်ကြိမ်အားသွင်းထားရုံဖြင့် ပုံပေါင်း 800-900* ခန့်အထိ ရိုက်ကူးနိုင်လောက်အောင် ဘက်ထရီ တာရှည်ခံပါသည်။ ပါဝါချွေတာရန်အတွက် မျက်စိနှင့် ခွာထားချိန်ကို မျက်စိဆင်ဆာက ရှာဖွေထောက်လှမ်းပြီး ကင်မရာက အိပ်စက်မုဒ်ထဲသို့ အလိုအလျောက် ဝင်ရောက်သွားသည်။ ရှတ္တာခလုတ်ကို တစ်ချက်မျှ နှိပ်ရုံဖြင့် ရိုက်ကူးမုဒ်ထဲ မြန်ဆန်စွာ ပြန်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
* အိပ်စက်မုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ရန်အချိန်ကို3စက္ကန့်သို့ သတ်မှတ်ထားလျှင်။
Battery Grip DMW-BGG1 (သီးခြား ရောင်းချပေးပါသည်)
ဘတ္ထရီတစ်လုံးကို ကင်မရာထဲတွင် ထည့်သုံးပြီး အခြားတစ်လုံးကို လက်ကိုင်* ထဲတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားသည့်အတွက် DMW-BGG1 က ဘက်ထရီသက်တမ်းကို နှစ်ဆ တိုးစေပြီး အချိန်ကြာကြာ ရိုက်ကူးနိုင်စေသည်။ ထို့အပြင် ဒေါင်လိုက်အနေအထားဖြင့် ထောင့်မှ ရိုက်ကူးသည့်အခါတွင်လည်း လက်ကိုင်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်စေသည်။ LUMIX G85 အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော DMW-BGG1 သည် ကင်မရာနှင့် အလွန်တရာမှ လိုက်ဖက်ညီပြီး ရေ/ဖုန် မဝင်သည့် အေးခဲမသွားသည့် အကြမ်းခံ ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
* DMW-BGG1 ထဲတွင် ဘတ္ထရီအထုပ် ပါဝင်သည်။
သဘာဝအတိုင်း စစ်မှန်သော အသေးစိတ်ပုံရိပ်များ
G85 ၏ low pass filter မပါသော 16-megapixel Digital Live MOS ဆင်ဆာက သင် ခရီးထွက်ချိန်တိုင်း ပို၍ အသေးစိတ်ကျသော ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားသည့် ပုံများကို ဖမ်းယူရိုက်ကူးနိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။
သင်၏ စွန့်စားခရီးစဉ်များသည် ယခုလောက် ကြည့်၍မကောင်းခဲ့ဘူးပါ
4K Video ၏ အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးဖြင့် LUMIX G85 သည် သင့် ခရီးစဉ်၏ အပြောင်းအလဲတိုင်းကို Full HD ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး၏ 4x အထိ ရိုက်ကူးယူနိုင်ပါသည်။ ပို၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ပို၍ အသေးစိတ်ကျသည် ဆိုသည်မှာ ပြီးပြည့်စုံသည့် အရည်အသွေးဖြင့် အတိတ်ကို ပြန်ကြည့်ရန် အမှတ်တယများ ပိုမိုရှိခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
အကောင်းမွန်ဆုံးသော ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်မှု၊ မြင့်မားသော အလင်းအမှောင် ပြတ်သားမှုနှင့် နှစ်လိုဖွယ် အရောင်ထပ်ဆင့် ထုတ်ပေးမှုတို့ဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် သဘာဝအတိုင်းစစ်မှန်သော ရုပ်ပုံများကို ရိုက်ကူးယူလိုက်ပါ။ Low Pass Filter ကို ဖယ်ရှားလျက် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရှိနေသော ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို 10%* ခန့်အထိ တိုးမြှင့်ထားပါသည်။ အရောင်ပြေးထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချရန် LUMIX G85 အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားသည့် Venus အင်ဂျင်ကို အသုံးပြုပြီး ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ရှာဖွေပေးသည်။ Digital Live MOS Sensor နှင့် Venus Engine ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့် အလင်းရောင် အားနည်းသည့်အခြေအနေများတွင် အစက်အပြောက်အနည်းဆုံးနှင့် ISO25600 ၏ အမြင့်ဆုံး အာရုံခံနိုင်မှုစွမ်းဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဓာတ်ပုံများကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
* LUMIX G7 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသော Panasonic
L. Monochrome သည် ပို၍ဖန်တီးထားသော ဓာတ်ပုံပညာရပ်အတွက် Photo Style ကို ရရှိရန် ထပ်ထည့်ထားသည့် နည်းလမ်းအသစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းက ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ကဲ့သို့ အနက်ရောင်များနှင့် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုများဖြင့် အားကျနှစ်လိုဖွယ် အဖြူအမည်းဓာတ်ပုံများကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။